के गर्न खोज्दैछन् प्रधानमन्त्री ओली, चार सुरक्षा निकायका प्रमुखले किन गरे भेट ? — newsparda.com
के गर्न खोज्दैछन् प्रधानमन्त्री ओली, चार सुरक्षा निकायका प्रमुखले किन गरे भेट ?
काठमाण्डौँ । मुलुकको चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर आइतबार दिउँसो नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका हुन् ।
भेटमा मुलुकको पछिल्लो घ टनाक्रम, चितवन घ टना, वि प्लव समूहको गतिविधिको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गरेको भेटमा सहभागि एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले बताए । भेट दिउँसो १२ बजेदेखि सव एक बजेसम्म भएको स्रोतले जनाएको छ।
काठमाण्डौँ । मुलुकको चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर आइतबार दिउँसो नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका हुन् । भेटमा मुलुकको पछिल्लो घ टनाक्रम, चितवन घ टना, वि प्लव समूहको गतिविधिको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गरेको भेटमा सहभागि एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले बताए । भेट दिउँसो १२ बजेदेखि सव एक बजेसम्म भएको स्रोतले जनाएको छ।